Taariikhda Axmed Maxamed Islaam (Axmed-Madoobe) - BBC News Somali
Image caption Golihii Iskaashiga maamul Goboleedyada waxaa ka haray keligii
Hase yeeshee waxay warbaahintu waagaa tabinaysay warar is burinaya oo qaarkood ay tibaaxeen ba in uu isagu isku cumaamaday hogaanka maamulkii la dhisay oo uu "xoog ku maroorsaday", hase yeeshee waxa kale oo warbaahinta kale ku warantay inuu "cod aqlabiyad ah" ku guulaystay.
Guddiga doorashada Jubbaland oo jawaab kama dambeys ah siiyay Qaramada Midoobay
Ergaygii gaarka ahaa ee xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa ku tilmaamay Axmed-Madoobe inuu yahay "qof qayb muhiim ah ka qaadanaya nabad raadinta iyo dib u heshiisiinta" Soomaaliya.
Xilalkii uu soo qabtay:
2006: Gudoomiyaha Jubbada Hoose - Maamulkii Midowgii Maxkamadaha Islaamiga ah.
2013 - August 2019 Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland.
Image caption Axmed Mdoobe iyo James Swan
Jubaland oo gaashaanka u daruurtay in dowladda Federaalka ay ku lug yeelato doorashada
17 Agoosto 2019